कान्तिपुर मलले सार्बजनिक गर्यो उपहार योजनाका विजेता, कसले के पाए ?
Monday, 18 Nov, 2019 11:50 AM
२ मंसिर काठमाडौ । राजधानीको गंगबुमा रहेको कान्तिपुर मलले दशैँ, तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा सञ्चालन गरेको उपहार योजनाका विजेताको नतिजा सार्बजनिक गरेको छ ।
मल व्यवस्थापन, व्यापार संघका प्रतिनिधि, मलका व्यवसायी, प्रहरी तथा सञ्चारकर्मीको रोहबरमा सनिबार एक कार्यक्रमका बिच उपहार चिठ्ठा खोलिएको हो । उपहार योजना अन्तरगत प्रथम पुरस्कार कुपन नं. २०५०८ ले १ सय ५० सिसिको यमाहा एफ जेड एफ आइ भि थ्रि मोटरसाइकल जित्न सफल भएका छन् । यस्तै द्धितिय पुरस्कारमा कुपन नं. १५९०९ ले यामाहाकै १ सय ५० सिसिको एफ जेड एफ आइ भि टु मोटरसाइकल जित्न सफल भएका छन् । यसैगरी तेस्रो पुरस्कारमा कुपन नं. १६८६७ ले यमाहाको १ सय ३३ सिसिको एफ जेड एफ आइ भि टु स्कुटर जित्न सफल भए । यसैगरी उपहार योजनामा चौथो पुरस्कारमा कुपन नं. ०४२३३ ले एलजीको ४३ इन्च टिभि जित्न सफल भए भने पाँचौ पुरस्कारमा कुपन नं. ५३२५ ले ३२ इन्चको एलइडि टिभि जित्न सफल भए । यस्तै छैठौँ उपहारमा कुपन नं. ०८७८४ ले एलजीको १ सय ९० लिटरको फ्रिज जित्न सफल भए भने अन्य पाँच जनाले निमाको घडी जित्न सफल भए ।
सनिबार उपहार विजेता सार्बजनिक कार्यक्रममा कान्तिपुर मलका महाप्रबन्धक अमर निरौलाले दशैँ तिहारमा सञ्चालित कार्यक्रम उत्साहजनक ढंगबाट सम्पन्न भएको बताए । उपहार बिजेतालाई सम्पर्क गरि एक हप्ता भित्र उपहार हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाई छ । ३० हजार उपहार कुपनमध्येबाट गोलाप्रथाबाट विजेता छानिएको हो । कान्तिपुर मलले हरेक वर्ष दशैँ तिहारमा उपहार योजना ल्याइ मंसिर १ गते विजेता सार्बजनिक गर्ने र त्यसको एक सातामा उपहार हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।